Miainga amin’ny nahatrarana ny mpamily voakarama ny fanadihadian’ny mpitandro filaminana. Ny sabotsy alina 15 jona teo, nahazo loharanom-baovao ny polisy tao amin'ny kaomisaria boriborintany voalohany ao Tanambao, Toamasina fa nisy andian'olona nikasa hamaky magazain-jirofo eny amin'ny faritra RN5. Rehefa nahare an'izany ny polisy dia nidina tany an-toerana avy hatrany ka namantatra sy nisambotra an'ireo jiolahy. Tamin'io fotoana io dia tratra ny fiarabe nitondra ny entana halatra 8 taonina na 160 kitapo niaraka tamin'ny mpamily. Nentina tany amin'ny kaomisaria ny fiarabe izay misy ny entana niaraka amin'ny mpamily mba hatao fanadihadiana. Nahavitan'izy ireo taratasy hosoka anefa ny entana mba hahafahana mitondra azy eny an-dalana. Nilaza ny mpamily fa nisy nanakarama 150.000Ariay izy hitondra an’ireo entana ireo. Mitohy ny fanadihadiana.